Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Chlorambucilကို သွေးကင်ဆာ၊ ပြန်ရေကြောကင်ဆာ စတဲ့ကင်ဆာ အမျိုးအစားတွေကို ကုသဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။Chlorambucilဟာ အယ်လ်ကာလီဓါတ်ဖြစ်စေတဲ့ ဆေးအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကြီးထွားမှု ရပ်သွားစေတဲ့ (သို့) နှေးသွားစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း တနေ့တကြိမ်သောက်ပါ။ ဆရာဝန်က တခြားညွှန်ကြားတာမရှိဘူးဆိုရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်အောင် ရေများများနဲ့သောက်ပါ။
ဆေးပမာဏဟာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ ကုသမှုအပေါ် တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ တခြားဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေရခြင်း စတာတွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဆေးကိုတိုးသောက်ခြင်း၊ မကြာမကြာသောက်ခြင်း မလုပ်ပါနဲ့။ အခြေအနေပိုမကောင်းလာဘဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသာ ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးကို အရေပြားနဲ့ အဆုတ်ကနေစုပ်ယူနိုင်ပြီး သန္ဓေသားကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်တာမို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ ဆေးကိုကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ရှူခြင်းမလုပ်သင့်ပါဘူး။
Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Chlorambucilကို အခန်းအပူချိန်မှာ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့အောင်၊ စိုစွတ်မှု မရှိအောင် သိမ်းဆည်းတာဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းခြင်း မဖြစ်ရအောင် ရေချိုးခန်းတွင်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုရပါ။ Chlorambucilဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းခြင်းမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Chlorambucilကို အိမ်သာတွင်းထဲ ပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်း မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့ရင်၊ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားရင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လို စွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Chlorambucilမသောက်ခင်မှာ ဒီဆေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားအယ်လ်ကာလီဓါတ်ဖြစ်စေတဲ့ ဆေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် (busulfan, cyclophosphamide စသည်) ဓါတ်မတည့်တာရှိရင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ဖွင့်ပြောပါ။ ဒီပစ္စည်းမှာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ တခြားပြသနာတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုသိရအောင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
ဆေးမသုံးခင်မှာ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို (အထူးသဖြင့် ဂေါက်ရောဂါ၊ သွေးထွက်သွေးယိုတတ်ခြင်း၊ အသည်းရောဂါ စတဲ့ပြသနာတွေ ရှိရင်) ဆရာဝန် (သို့) သူနာပြုကို ဖွင့်ပြောပါ။
Chlorambucilသောက်သုံးစဉ်မှာ ရောဂါပိုးဝင်တတ်တာ၊ ရှိနေတဲ့ ရောဂါပိုးကို ပိုဆိုးစေတတ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိသူတွေကို (ရေကျောက်၊ ဝက်သက်၊ တုတ်ကွေး စသည်)ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ပါ။ ရောဂါပိုးကူးစက်ထားရင်၊ ပိုသိချင်ရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဆရာဝန်နဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း မပြုပါနဲ့။ မကြာသေးမီက ပိုလီယို ကာကွယ်ဆေး သောက်ထားသူ၊ တုတ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးရှူထားသူများနဲ့ ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ထိခိုက်ရှနာမဖြစ်အောင်၊ သွေးခြေဥခြင်း မဖြစ်အောင် ဘလိတ်ဓါး၊ လက်သည်းညှပ် စတာတွေကို သတိနဲ့ ကိုင်တွယ်ပါ။ တွန်းတိုက်မိတဲ့ အားကစားတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ခွဲစိတ်မှု ခံယူရမယ်ဆိုရင် သောက်နေရတဲ့ ဆေးအမျိုးအစားအားလုံး (ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာ၀ ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အပါအဝင်) ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
ဒီဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ ကလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးမရဘဲမြုံခြင်း၊ အတက်ရောဂါ စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ဖွင့်ပြောပါ။ Chlorambucil သောက်နေချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်သင့်ပါဘူး။ Chlorambucil သောက်နေတုန်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရလာရင်လည်း အကျိုးအပြစ်တွေကို သိရအောင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဒီဆေးဟာ မိခင်နို့ထဲ ဖြတ်သန်းနိုင်သလားဆိုတာ မသိရပါဘူး။ ကလေးအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ အန္တရာယ်တွေ ရှိတာကြောင့် ဒီဆေးသောက်နေတုန်း ကလေးနို့်တိုက်ခြင်းကို လက်မခံပါဘူး။
ဆေးသုံးနေချိန် မိခင်နို့တိုက်ရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Chlorambucilကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ အသုံးပြုရင် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာ စမ်းသပ်ချက်တွေ မရှိပါဘူး။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ကောင်းကျိုးများနဲ့ ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Chlorambucilဆေးဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များမှာ ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့် D ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များမှာ ထိခိုက်နိုင်ခြေ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပျို့အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့အခြေအနေတွေမှာ ဆရာဝန်ဟာ ပျို့အန်ခြင်းကို သက်သာစေဖို့၊ ကာကွယ်ဖို့ ဆေးဝါးတွေ ပေးတတ်ပါတယ်။
အစားမကြာခဏစားခြင်း၊ ဆေးမသောက်ခင် အစာမစားခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း စတာတွေဟာ အဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ အဲဒီပြသနာတွေ ပျောက်မသွားရင်၊ ပိုဆိုးသွားရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဒီဆေးကို ပေးရခြင်းဟာ ဆိုးကျိုးထက် ကောင်းကျိုးက ပိုများတယ်လို့ ယူဆလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုသုံးတဲ့ လူအများမှာတော့ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မကြုံရပါဘူး။ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ သွေးခြေဥလွယ် သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ ပါးစပ်အနာများပေါက်ခြင်း၊ ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ တောင့်တင်းခြင်း အားနည်းခြင်း၊ ခြေလက်များ ထုံကျင်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုရှိခြင်း (စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ အာရုံခြောက်ခြားခြင်း စသည်)၊ အသည်းပြသနာ လက္ခဏာများ (ဆက်တိုက်ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ မျက်လုံးနှင့်အသားဝါခြင်း၊ ဆီးမည်းခြင်း)၊ အမျိုးသမီးများ ရာသီထိန်ခြင်း စတာတွေဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ပြပါ။ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့
ဒီဆေးကြောင့် ဆိုးရွားတဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေဖြစ်တာ ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေပြားအကွက်ဖြစ်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ လျှာ လည်ချောင်း)၊ ဆိုးရွားစွာ မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေကြုံရရင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူပါ။
ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရချိန်မှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ မပါဝင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Nalidixic acid ပါဝင်တဲ့ဆေးနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Chlorambucilဟာ သင်ယခု သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Chlorambucilဟာ အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Chlorambucilဟာ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရောဂါများရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ Hodgkin ရောဂါအတွက်
ကနဦးကုသမှု (သို့) ရေတိုကာလကုသမှုများ
ပုံမှန်သုံးစွဲရတဲ့ ဆေးပမာဏကတော့ တရက်လျှင်/ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ကီလိုလျှင် ဝ.၁-ဝ.၂ မီလီဂရမ်နှုန်းနဲ့ ၃ပတ်မှ ၆ပတ်ထိသောက်သုံးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။(ပျမ်းမျှအနေနဲ့ တရက်ကို ၄-၁၀ မီလီဂရမ်နှုန်းလောက် ဖြစ်ပါတယ်။) ဆေးအကုန်လုံးကို တချိန်တည်းမှာပဲ သောက်ရပါတယ်။ လူနာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏကို သေချာစွာထိန်းညှိပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သွေးဖြူဥပမာဏ ရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားရင် ဆေးကိုလျှော့ချလိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ Hodgkin ရောဂါရှိသူများဟာ နေ့စဉ် ဝ.၂ မီလီဂရမ် လိုအပ်ပါတယ်။ ပြန်ရေကြောကင်ဆာနဲ့ နာတာရှည် သွေးကင်ဆာခံစားနေရသူများဟာ နေ့စဉ် ဝ.၁ မီလီဂရမ် လိုအပ်ပါတယ်။ လင်ဖိုဆိုက်ဆဲလ်များ ရိုးတွင်းခြင်ဆီထဲ ဝင်ရောက်မှုရှိရင်၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီပမာဏ နည်းသွားရင် နေ့စဉ်ပမာဏဟာ တစ်ကီလိုဂရမ်မှာ ဝ.၁ မီလီဂရမ်ထက် မကျော်သင့်ပါဘူး (ပျမ်းမျှ ၆ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်)။ နောက်တနည်းကတော့ chlorambucil ကို တနေ့တကြိမ် ၁၀မီလီဂရမ်နဲ့ ၂၁ရက်အတွင်းမှာ ၇ရက်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုသမှုနည်းလမ်းမှာ vinblastine, procarbazine, prednisolone, etoposide, vincristine, doxorubicin စတာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နာတာရှည်သွေးကင်ဆာအတွက် ဆေးပေးကုသမှုအချိန်ဇယားမှာ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေးခြင်း၊ နှစ်ပတ်တခါပေးခြင်း၊ တလတခါပေးခြင်း စတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ထောက်ခံမှုပြုထားတဲ့ ပမာဏကတော့ ဆေးပြား ၁-၂ ပြားကို တနေ့ ၃ကြိမ် သောက်သုံးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏ ပြောင်းလဲမှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေးခြင်းအတွက် ကနဦးပမာဏကတော့ တစ်ကီလိုမှာ ဝ.၄ မီလီဂရမ်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏကို တစ်ကီလိုမှာ ဝ.၁ မီလီဂရမ်နှုန်းနဲ့ လင်ဖိုဆိုက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်း စတာတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲဆေးပမာဏကို သာမန်သွေးဆိပ်ဖြစ်စေသလောက်ထိပဲ ပြုပြင်ထားပါတယ်။ ၂ပတ်တခါပေးခြင်း၊ တလတခါပေးခြင်းနည်းလမ်းတွေဟာ အရင်နေ့စဉ်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းလိုပဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သွေးထဲမှာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်မှုလည်း ပိုနည်းပါတယ်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းနဲ့ ဆဲလ်ကိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ ဆေးတွေဟာ ရိုးတွင်းခြင်ဆီကို ပိုပျက်စီးစေပါတယ်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်နဲ့ ဆေးသွင်းကုသခြင်းပြုလုပ်တဲ့ ၄ပတ်တာကာလမှာ chlorambucil ကို သတိပြုသုံးစွဲရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီရဲ့ အပြင်ပန်ူးလောက်ကနေရာတွေကို ထိတွေ့ခြင်းဟာ နျူထရိုဖေးလ်နဲ့ သွေးဥမွှာတွေကို ကျဆင်းခြင်း မဖြစ်စေပါဘူး။ chlorambucil ကို ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်း၂မျိုးလုံး ထိရောက်ပေမယ့် ရေတိုကုသမှုလေးတွေဟာ ပုံမှန်စွဲသောက်ရတာထက် ဘေးကင်းစိတ်ချရပါတယ်။ အဆက်မပြတ်ကုသမှုဟာ ရောဂါပျောက်ကင်းပြီး နောက်ထပ်ဆေးဝါးမလိုတော့တဲ့ လူနာတွေမှာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရာရောက်စေပါတယ်။ ဆက်ပြီးပေးမယ်ဆိုရင် တနေ့မှာ တစ်ကီလို ဝ.၁ မီလီဂရမ်နှုန်းထက် မကျော်ဖို့ အနည်းဆုံး ဝ.၀၃ မီလီဂရမ်နှုန်းရှိဖို့ လိုပါတယ်။ စံပြုပမာဏကတော့ နေ့စဉ် ၂-၄ မီလီဂရမ်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ သွေးဆဲလ်ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ နည်းချင်လည်း နည်းပါလိမ့်မယ်။ အမြင့်ဆုံးအခြေအနေလေက် ထိန်းသိမ်းနိုင်သွားရင် ဆေးကိုရပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကုသခြင်းဟာ ရောဂါပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင် ပြန်ပြီးဆေးပေးတဲ့အခါ ဆက်တိုက်ကုသမှုလိုပဲ ထိရောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ Chronic Lymphocytic Leukemiaရောဂါအတွက်
ယေဘုယျအားဖြင့် အသက်ကြီးပိုင်းများအတွက် ဆေးပမာဏရွေးချယ်ရာမှာ အထူးသတိထားရပါတယ်။ အနည်းဆုံးပမာဏကနေ စပေးရပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပျောက်ကင်းစေသည်အထိ ပေးခြင်း။ တရက်လျှင် တစ်ကီလိုလျှင် ဝ.၁မှ ဝ.၂ မီလီဂရမ် (သို့) တရက်လျှင် m2 လျှင် ၄.၅ မီလီဂရမ်ဖြင့် ၃-၆ပတ်ထိ
ဆက်လက်ကုသခြင်း။ တရက်လျှင် တစ်ကီလိုလျှင် ဝ.၀၃မှ ဝ.၁ မီလီဂရမ်အထိ
Nephrotic Syndrome။ တရက်လျှင် တစ်ကီလိုလျှင် ဝ.၁ မှ ဝ.၂ မီလီဂရမ်အထိ ၅ပတ်မှ ၁၂ပတ်အထိ ပရနီဆလုံး ပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့် နေ့စဉ်သောက်ရန်။
Chronic Lymphocytic Leukemia အတွက်။
ကနဦးပမာဏ။ တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ဝ.၄ မီလီဂရမ်နှုန်းဖြင့် ၂ပတ်ကြာတိုင်း (၂ပတ်ကြာတိုင်း တစ်ကီလိုမှာ ဝ.၁ မီလီဂရမ်နှုန်းနဲ့ တုံ့ပြန်မှုရှိလာတဲ့အထိ ပေးပါတယ်)
ကနဦးပမာဏ (အခြားနည်း)။ တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ဝ.၄ မီလီဂရမ်နှုန်းဖြင့် ၄ပတ်ကြာတိုင်း (၂ပတ်ကြာတိုင်း တစ်ကီလိုမှာ ဝ.၂ မီလီဂရမ်နှုန်းနဲ့ တုံ့ပြန်မှုရှိလာတဲ့အထိ ပေးပါတယ်)
Non-Hodgkin’s Lymphoma အတွက်။ တနေ့လျှင် ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုလျှင် ဝ.၁ မီလီဂရမ်
Hodgkin’s Lymphoma အတွက်။ တနေ့လျှင် ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုလျှင် ဝ.၂ မီလီဂရမ်
Chlorambucil (ကလိုရမ်ဘက်စဲလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Chophytol ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများ၊အချိုးအစားများနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏ လွန်သွားတဲ့အခြေအနေများမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှု ခံယူပါ။
Chlorambucilဆေးကို သုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံး သုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကို ကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာသာ သုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်း မလုပ်ပါနဲ့။
Chlorambucil Tablet. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-14006/chlorambucil-oral/details. Accessed January 15, 2018.
Chlorambucil Dosage. https://www.drugs.com/dosage/chlorambucil.html. Accessed January 15, 2018.